Ngakho-ke, namuhla ukunakwa kwakho kuzonikezwa kwi-smartphone ebizwa ngokuthi "Land Rover A8". Kuyini? Lo mkhiqizo waseRussia ubonakala kungekudala, kepha uthanda abaningi. Yini ngempela? Yini okufanele ngibheke kule foni? Yini eyenza kube ekhethekile kangaka? Kubaluleke kakhulu ukuqonda konke lokhu. Kuphela-ke kuyokwazi ukuqonda ngokugcwele ukuthi iyiphi ifoni. Ngakho-ke, yilowo nalowo angakwazi ukunquma ukuthi lo mkhiqizo uhlangabezana nezilindelwe kangakanani.
"I-Land Rover A8" i-smartphone yesizukulwane esisha. Uhluke kakhulu "kumuntu" wakhe. Lena igama elisha ngokuphelele phakathi kobuchwepheshe. Ngokuvamile izici ziguquka nama-smartphone amaningi, kodwa ngokubukeka nokumpikiswano - cha.
Ngokuvamile kuvame ukuthi lo mkhiqizo usetshenziswe ngabadlali. Futhi ngenxa yalokho kunezizathu. I "Land Rover A8" ine yonke imisebenzi ye-smartphone yanamuhla. Ungathatha izithombe bese wenza izingcingo. Kodwa ubhekisela kuphi ngokujwayelekile? Yini okufanele ngiyibheke kubathengi besikhathi esizayo?
Buyekeza ifoni "Land Rover A8" kufanele iqale ngokubonisa. Kuye abakulalela kuqala. Ngemuva kokuphazamiseka kwalesi sici kubangela ukungakwazi ukusebenza ngegajethi.
Kuthiwani ngeskrini? Akukakhulu kakhulu ngamazinga anamuhla. I-diagonal ingamasentimitha amane kuphela. Kodwa njengoba abathengi bethi, lokhu kukwanele ukusebenzisa zonke izici zocingo.
Kodwa isinqumo sesiboniso asijabulisi abaningi. Kuyinto encane - kuphela ngamaphesenti angama-600 kuphela. Noma kunjalo, ngokunikezwa kwedivaysi, lokhu kwanele ukubuka ividiyo nezithombe ngekhwalithi enhle.
Isici esihlukile socingo ukuthi "I-Land Rover A8" isebenzisa ubuchwepheshe bokuvikelwa kwesiboniso "I-Glass Gorilla". Singasho ukuthi isikrini kunzima kakhulu ukulimaza idivayisi. Futhi konke lokhu kubonga kulobu buchwepheshe.
Yini elandelayo? Izingxenye ezimbili ezilandelayo azibalulekile kakhulu, kodwa nazo zilalela. Kuphathelene nokuklama nobukhulu bedivayisi. Kumele kuqashelwe ukuthi ngokwesayizi, i-Land Rover A8 ayihluke kakhulu kuma-Smartphone amaningi anamuhla. Le gadget isincane futhi idlulile. Noma kunjalo, ukubuyekezwa kubonisa ukuthi kulula ukuphatha leyo foni. Ngisho nasesandleni esincane. Ubukhulu be-smartphone: ubude buyizigidi eziyi-138, ububanzi - 69, obukhulu-21.
Ukuklanywa kwedivayisi kudonsela kuye. Phela, i-smartphone yangaphandle "Land Rover A8" ibonakala ingavamile. Kubonakala sengathi ifoni ifakwe izikhali ezengeziwe, ezakha umklamo. Kunemibala eminingana:
Ngakho-ke, kunokuningi okumele ukhethe kusuka. Kumele kuqashelwe ukuthi ukubukeka kwe-smartphone akuyona nje isikrini sokuthinta, kodwa ngempela ifoni. Kuyinto "ukubukeka" okungavamile okuvame ukuheha abanikazi abanakho.
Inkumbulo yefoni ingenye isici esibalulekile. Kukhona ama-Smartphones amabili kuma-smartphones awo. Kukhona okusebenzayo, kukhona okukodwa ngaphakathi. Owokuqala unesibopho samandla jikelele nokusebenza kwegajethi. Yincane kakhulu. Ikakhulukazi kudivayisi yesimanje. Ngokuphelele, i- "Land Rover A8" engu-512 MB we-RAM. Yingakho abanikazi abaningi bekhomba ukuthi lokhu akukona nge-smartphone yokudlala. Kulo, cishe akukho mdlalo ozoqala. Kuphela kuphela. Kodwa lokhu akuyona inkinga enjalo. Ikakhulukazi uma ekuqaleni umthengi engaboni ifoni yemidlalo.
Inkumbulo engakhelwe yindawo egcinwe kumadokhumenti womsebenzisi. I-smartphone "Land Rover A8" ayinalutho kakhulu - i-4 GB kuphela. Kodwa ngesikhathi esifanayo ungakwazi ukwandisa lesi sibalo ngenye i-32 GB ngokuxhuma imemori khadi eyengeziwe. Ukubuyekeza kubonisa ukuthi le ndawo inokwenzela umsebenzi. Izinkinga ngephutha lememori azivuki.
Isistimu yokusebenza neprosesa
Yini enye i-Land Rover A8 enayo? Isici, esihambisana nenkumbulo yokusebenza enesibopho samandla wedivayisi, yinkqubo. Awunamandla kakhulu nomkhiqizo. Kodwa abathengi nabanikazi abakhulumi lutho olubi ngalokhu. Iphuzu eliphelele ukuthi iprosesa yi-1.2 GHz. Le ngxenye yenzelwe ama-cores amabili. Ngokuvamile, amandla e-smartphone angama-2.4 GHz. Kwanele emsebenzini kanye neminye imidlalo.
Uhlelo lokusebenza lapha, njengoba abanikazi bethi, lidala kakhulu. Ngokuyinhloko, ngokucabangela zonke ezinye izici, kungacatshangwa amandla ahambelana ne-smartphone. Ifoni ephathekayo "Land Rover A8" inikezela ukusetshenziswa "version" 4.2. Akunzima ukuqagela ukuthi amashaveli wemboni yokudlala yeselula ngeke aqaliswe lapha. Akunconywa ukubuyisela nokubuyekeza i-OS - ifoni ngeke idonse izinguqulo ezintsha ze "Android." Leli qiniso kumele libhekwe.
"I-Land Rover A8" i-smartphone yesizukulwane esisha. Kodwa ukwahlulela ngezici, kungcono kakhulu kunabo "abazalwane" banamuhla. Noma kunjalo, kunemisebenzi ejwayelekile kuyo. Isibonelo, ikhamera.
Ikhamera kugajethi 2 ingaphambili nangemuva. Njengoba umkhuba ubonisa, lesi senzakalo sijabulisa abathengi. Ikhamera yokuqala ayidubuli kahle, kepha ukuze kube khona i-selfie noma ikholi yevidiyo lokhu kuzokwanela. Isixazululo singu-1.3 MP. Ingemuva ihloselwe ukuhlola okuyinhloko. Futhi ihlasela ngesinqumo sama-megapixel angu-5. Akuningi kakhulu, kodwa hhayi okuncane.
Isici esihlukile salesi smartphone yilokho ikhamera idutshulwa ngokugcwele. Thatha isithombe nevidiyo kuhle. Ngezandla ezihlakaniphile ifoni izojabulisa izithombe ezikhanyayo, ezicacile neziphezulu. Izici ezijwayelekile ezifana ne-flash kanye nobuchwepheshe bokuqaphela ubuso buhlinzekwa.
Ukubhekwa okuhlukile kuyadingeka ibhethri efonini. Yena, njengoba bethi ukubuyekezwa okuningi, kuphela kumnandi abathengi. Mhlawumbe, isibalo esincane se-Smartphones singakwazi ukuziqhayisa ngokukhuthazela kwabo. "I-Land Rover A8" ibhekisela kunani lamagajethi afanayo.
Ibhethri lenziwe ubuchwepheshe be-Li-On. Yenzelwe i-3000 mAh. Isikhathi sokukhuluma singamahora angu-10. Ngomsebenzi osebenzayo ungahlala ezinsukwini ezingu-3-4. Lokhu yisikhathi eside kakhulu. Ngakho-ke, ibhethri eminingi yomsebenzi ojabulisayo. Uma kunesidingo, kungashintshwa. Ngokungafani namamodeli amaningi wanamuhla we-Smartphones, ibhethri "Land Rover A8" isusiwe. Ngakho, ngokushintshwa kwalo ngeke kube nezinkinga.
Futhi, ifoni ekhonjiwe iyaphawuleka ngesivinini sayo. Abanikazi abaningi bedivaysi bagcizelela ukuthi ngisho nokusetshenziswa okude futhi okusebenzayo akudingeki ukhathazeke - igajethi izoqhubeka isabela emiyalweni ethunyelwe. Futhi ngokushesha kakhulu.
Yiqiniso, uma izinhlelo eziningana ziqhuba ngesikhathi esisodwa ohlelweni lokusebenza, ezinye izinkinga zokusebenza zizovela. Phela, "i-Land Rover A8" ngokwayo ayinamandla kakhulu. Uma ukhumbule lokhu, ungasebenza ngaphandle kwezinkinga iminyaka eminingi.
Isici esilandelayo yisici esiyinhloko segajethi. Mayelana "nokuphila" kwe-smartphone. Yini esikhuluma ngayo? Yini i-Land Rover A8 ifoni elungiselela abanikazi bayo? Imfundo ibonisa ukuthi leli gadget lifanelana ngokuphelele nemiphetho. Phela, ifakwe ukuvikelwa okunokwethenjelwa.
Kusho ukuthini lokhu? Ukuvikelwa kwe-IP68 kunikeziwe. Lokhu kufanele kuqondwe kanjani? Ungakwazi, ngokwethukela, ukulahla ifoni kusuka ekuphakameni okukhulu, ngaphandle kokukhathazeka ngokusebenza kwayo nobuqotho. Icala legajethi linokumangaza okukhulu. Ngokuvamile, "i-Land Rover A8" iyi-smartphone yezemidlalo nabalandeli bezemidlalo ezidlulele. Ngeke besabe ukuthi amafoni abo azolimala ngenkathi kwenziwa amanye amaqhinga. Lesi sici esithile sikhangisa abathengi.
Kuzo zonke ezingenhla, singaphetha ngokuthi lena i-smartphone yezemidlalo. Leli qiniso liqinisekisiwe hhayi nje ngomzimba omuhle onokuvikelwa, kodwa futhi "ngokugxila" kwedivayisi. Into yukuthi ukubuyekezwa okuningi kubonisa ukuthi uhlelo lokusebenza lunezinhlelo zokusebenza ezengeziwe zabadlali. Abashiyi abantu abavamile abangenandaba noma kunjalo.
Isibonelo, ungathola phakathi kwemisebenzi ejwayelekile i-flashlight, imitha yesilinganiso, i-barometer, i-altimeter, ikhampasi. Konke lokhu, njengoba kunzima ukuqagela, kuyoba usizo kuwo wonke umuntu odlala. Futhi kumnikazi ovamile, idatha yesicelo iyoba ukuzijabulisa okuhle. Konke lokhu kufakwe ngokuzenzakalelayo ku "Land Rover A8".
Futhi lapha kukhona i-Wi-Fi, i-GPRS, i-GPS. Ungakhohlwa ngobuchwepheshe bluetooth bluetooth ukudlulisa idatha. Iqiniso, le nguqulo yidatha-2.1. Lokhu kusho ukuthi amafayela "anzima" azosakazwa isikhathi eside. Akuyona iphutha elikhulu, kodwa ngezikhathi ezithile ukubuyekezwa kugcizelelwe.
Yini ejwayelekile kudivayisi? Lesi sici asibhekisele kuzo izici, kodwa abathengi abangase bahlale benesithakazelo kuso. Azikho izikhalazo kule ndawo.
Ngokuvamile, imishini ye-Land Rover A8 ingabizwa ngokuthi ijwayelekile. Ebhokisini enefoni uqobo, ungathola ibhethri, isitaki senkampani kwi-smartphone, ishaja nekhebula ukuxhuma igajethi kwikhompyutha. Ukwengeza, i-headphone ifakiwe kuphakheji, okukhuthaza kakhulu. Ngendlela, ifoni ine-connector ejwayelekile yokuxhuma i-headset kuya kumamitha ayi-3.5. Lokhu kuvumela noma yiliphi i-headphones ukuthi lisetshenziswe kanye ne "Land Rover".
Izindleko zedivayisi nazo ziyajabulisa. Ngokwesilinganiso, "I-Land Rover A8" izobiza umthengi i-ruble ayi-8-9 ayizinkulungwane. Lokhu akusizi kakhulu, uma ucabanga ngezinhlanganisela eziningi zefoni. Izinkinga ezifana namandla, futhi, zikhona, kodwa azibalulekile kakhulu. Phela, okokuqala leli gajethi alitholakali njengegajethi. Kunalokho, kufanelekile kulabo abahlanganyela ezemidlalo noma bahlele ukuthenga kuphela umsebenzi.
Isigaba sesilinganiso samanani nokuphikiswa okuphakeme kokushaqeka - yilokho okuheha "Land Rover A8" kakhulu. Ngakho-ke, lalela le foni kuwufanele, kodwa kuphela uma ngabe idivayisi ayidingekile emidlalweni. Manje kusobala ukuthi yikuphi "i-Land Rover A8" eyamukelayo. Ungakwazi ukuthola isiphetho ngokwakho ukuthi idivayisi ijabulisa kangakanani abanikazi!
I-Vertex ifoni: imininingwane kanye nokubuyekezwa
I-THL W8: ukubuyekezwa, ukusebenza okuhlukile, ibhukwana lenkonzo
I-Sony Ericsson Xperia Ray: incazelo, ukubuyekezwa, ukubuyekezwa. I-Sony Ericsson Xperia Ray ayivuli
Indlela ukupheka amadombolo ne cherry: isinyathelo ngesinyathelo iresiphi
Niko Pirosmani - umculi-primitivist. Biography, imidwebo, amaqiniso athakazelisayo zokuphila
Kwesidoda 'invitro "- ukunemba isiqinisekiso
Indlela zihlume kakolweni ukuthola kuwo lemali izakhamzimba?